Tompon'andraikitra ambony amin'ny fizahan-tany hitsidika an'i Jamaika hanatrika fivoriana avo lenta an'ny UNWTO
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Tompon'andraikitra ambony amin'ny fizahan-tany hitsidika an'i Jamaika hanatrika fivoriana avo lenta an'ny UNWTO
Associations News • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Niainga hiatrika ny fivorian'ny UNWTO avo lenta i Jamaika
Ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana misahana ny fizahan-tany eran-tany (UNWTO), Andriamatoa Zurab Pololikashvili, ary ny minisitry ny fizahan-tany ho an'i Arabia Saodita, ny Excellency Ahmed Al Khateeb, dia isan'ireo tompon'andraikitra misahana ny fizahan-tany erantany izay hitsidika an'i Jamaika amin'ity herinandro ity hanatrika ny fampifangaroana ny Vaomieram-paritra faha-66 an'ny Amerikana (CAM) an'ny UNWTO amin'ny 24 jona amin'ny XNUMX jona. Ity dia ity dia hanamarihana ny fitsidihan'i Andriamatoa Pololikashvili voalohany tany Karaiba miteny anglisy.
Ho tonga ny minisitry ny fizahan-tany Arabia Saodita miaraka amin'ny delegasiona iraika ambin'ny folo, ao anatin'izany ny mpampiasa vola.
Ny fifanakalozan-kevitra amin'ny famatsiam-bola dia avo lenta amin'ny fandaharam-potoana miaraka amin'ny minisitry ny fizahan-tany any Jamaika sy Barbados izay misolo tena an'i Karaiba.
Hisy andiana dinika mifandraika amin'ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin'ny fizahan-tany any Jamaika sy ny fizahan-tany any Arabia Saodita.
Ho fanampin'izany, ny Karaiba koa dia hisolo tena ny minisitry ny fizahantany sy ny fitaterana iraisam-pirenena ho an'i Barbados, ny loholona, ​​ny Hon. Lisa Cummins, dia handeha ho any Jamaika ihany koa hanatrika ny fivorian'ny CAM izay hotarihin'ny minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett. Ireo tompon'andraikitra misahana ny fizahan-tany dia handray anjara amin'ny diniky ny minisitra momba ny famelomana indray ny sehatry ny fizahantany ho an'ny fitomboana.
Ny minisitra Bartlett dia nanondro fa ny fampiasam-bola dia avo lenta amin'ny fandaharam-potoana rehefa hihaona amin'ny minisitry ny Saodiana ny tompon'andraikitra eo an-toerana. Nilaza izy fa ho avy miaraka Andriamatoa Al Khateeb miaraka amina delegasiona iraika ambin'ny folo, ao anatin'izany ny mpampiasa vola izay hiara-midinika amin'ny Minisitra tsy misy portfolio ao amin'ny Ministeran'ny Fisondrotana Toekarena sy ny Famoronana Asa, ny Senatera, ny Hon. Aubyn Hill, manodidina ny raharaha maromaro ao anatin'izany ny angovo azo havaozina.
Nanamarika ny maha-zava-dehibe ny fitsidihan'Andriamatoa Al Khateeb, ny minisitra Bartlett dia nilaza fa io no minisitry ny fizahan-tany arabo saodiana voalohany ary izy no hita ho minisitra lohalaharana mitazona io portfolio io any amin'ny faritra arabo. Izy koa dia manara-maso ny tetikasan'ny Ranomasina Mena, voalaza fa ny fizahan-tany lehibe indrindra tontosaina eto an-tany.
Nambaran'Andriamatoa Bartlett fa ny tetik'asa amin'ny Ranomasina Mena dia mitaky fananganana nosy maromaro mba hamoronana traikefa fizahan-tany vaovao mitentina 40 tapitrisa dolara amerikana izay hampifaninana ny resaka be resaka momba ny fampandrosoana an'i Dubai ary antenaina hanova ny toekarena miorina amin'ny solika ao Saudi Arabia ho lasa iray amin'ny fizahan-tany. Nilaza ny minisitra Bartlett fa zava-dehibe amin'i Jamaika izany satria nanasongadina ny lanjan'ny fizahantany ho fitaovana fanovana eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena.
Ny minisitry ny fizahan-tany Saodiana dia hitsidika ny Ivotoerana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny krizy (GTRCMC) ao amin'ny University of the West Indies, izay handray anjara amin'ny fivoriana roa tonta momba ny fiaraha-miasa amin'ny fizahantany. “Hisy andiana dinika mifandraika amin'ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amintsika fizahan-tany any Jamaika ary fizahan-tany any Arabia Saodita, ”hoy ny minisitra Bartlett.
Ary koa, ao amin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo dia ny fizahana ireo faritra fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny fivezivezena an-tsambo, ary koa ny faharetana sy ny faharetana "ary ny fananganana trano azo tsapain-tanana, antenaina, ao amin'ny faritra mba hahafahana mankasitraka bebe kokoa ny fizahan-tany maharitra, ary koa ny maha-zava-dehibe ny faharetana amin'ny fananganana ny fahafaha-miverina amin'ny fikorontanana izay hitranga amin'ny farany ", hoy Andriamatoa Bartlett.
Mandritra ny fotoana eto dia hitsidika ny tranombakoka Bob Marley, ny GTRCMC ary ny Craighton Estate ireo tompon'andraikitra fizahan-tany sy ny delegasionina. Ny Minisitra Bartlett koa dia handray sakafo hariva fandraisana ho an'ireo vahiny manokana ao amin'ny Devon House, raha ny praiminisitra, The Most Hon. Andrew Holness dia hanome izany fahalalam-pomba izany ihany koa ao amin'ny AC Marriott Hotel.